Google Pixel 3 Review - Rule News
Pixel The 3 lagu soo koobi karaa hal eray: nadiifin.
phone New gaadho Apple heerka of polish, qaab u oolli-, kamarad cajiib ah iyo naqshad soo jiidasho leh
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Google Pixel 3 dib u eegis: kor u bar ah ee waayo-aragnimo ah Android” waxaa qoray Samuel Gibbs, ee the Guardian.com khamiista 18ka Oktoobar 2018 05.00 UTC
Pixel The 3 waa xasiloonida sedexaad ee Google sameynta taleefankeeda ugu sareeya, Isagoo isku dayay inuu ka weynaado sida Apple iyo Samsung oo leh kamarad argagax leh iyo khibrad aad u sarreeya oo la ilaaliyay.
Pixel The 3 ayaa ka yar labada taleefan ee Google cusub, leh 5.5in FHD + OLED shaashad ah oo dhalaalaya, ciriiri iyo firfircoonaan. Waa soo bandhig qurux badan oo tallaabo muhiim ah uga sareysay sanadkii la soo dhaafay Pixel 2, oo leh xagal daawasho ballaaran oo leh kala beddelasho midab leh ugu yar.
Pixel The 3 muraayadaha naqshadda naqshaddii sanadkii hore Pixel 2 XL oo leh cirib weyn oo wejiga iyo wejiga ay kujiraan istudheerayaal stereo ah iyo kamarado kala duwan. Way cadaalad yar tahay heerarka casriga ah, taasoo fududaynaysa sida loo maareeyo iyo jeebka, la mid ah Pixel 2, Apple’s iPhone XS iyo Samsung Galaxy S9. Waxay kaloo iftiinkeedu yahay 148g marka loo eego 177g iPhone XS iyo 168g Galaxy S9, oo labaduba leh shaashado 5.8in ka weyn.
Dhabarka laba-cod waa hal gobal qaarad oo Gorilla Glass ah 5, oo leh hal qayb oo miiqan iyo kan kale oo la miiray. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Alaay aluminium ayaa sanadkii la soo dhaafay dib loo dhigay, lagu beddelay galaas laba-tone ah. Waxoogaa la qaboojiyey waa dhalada galaas ah, oo aad u fiican, laakiin waxaa ku hareereysan muraayad la sawiray iyo dhinacyada biraha daboolan ee caawinaya xajintaada. Isku darka wuxuu dareemayaa si cajiib ah oo jilicsan gacanta. Tani waa teleefoon aad rabto inaad ku bogsato.
Bartamaha dhabarka hoose ee guduudka dhalaalaya ayaa leh iskaanka sawirka faraha sida ku wanaagsan sanadkii hore. Ma jiraan xulashooyin amni biometari kale, sida waji fur, inkasta oo Pixel ah 3 haysashada laba kamaradood oo wajiga hore ah.
Qeybta hoose ee taleefanka waxay leedahay deked USB-C iyo saxan simme ah, halka batoonka mugga dhinaca midig waxaa kuxiraa batoonka awooda moogga yar. Ma jiro fiilo-madax-madaxeed oo la arki karo, laakiin kaameeradu kaliya dhabarka u xereysaa wax ka yar 1mm.
Screen: 5.5gudaha FHD + OLED (443ppi)
Nidaamka Operating: Android 9.0 goobeed
Camera: 12.2Xildhibaan gadaal camera la OI, dual 8MP camera horteeda
Xiriiriyaan: LTE, wifi, NFC, tusaale ahaan,, Bluetooth 5 iyo GPS
Cabirka: 145.6 x 68.2 x 7.9 mm
U jilicsan sida xariir
Dheecaanka sim wuxuu ku yaal hoose hoose ee dekada USB-C. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Pixel The 3 wuxuu leeyahay processor-ka sare ee hadda jira ee 'processor', Snapdragon ah 845, sida loo adeegsaday OnePlus 6 iyo inta badan calaamadaha casriga cusub ee hadda taagan, marka laga reebo noocyada UK ee Samsung's S9 iyo Note 9 iyo Telefoonnada Huawei, oo labadooduba adeegsadaan qalabka loo yaqaan 'chips chips' oo u gaar ah.
Pixel The 3 kaliya ayaa leh 4GB Ram, marka la barbar dhigo 6GB ama xitaa 8GB qaar ka mid ah tartamayaasha ugu sareeya ee Android. In kasta oo ay ku badin karto ciyaar ah Top Trumps, looma arki karo isticmaalka maalinlaha ah sababta oo ah Pixel 3 waa mid aad u wanaagsan oo shaqeynaya, oo leh waxqabadka ciyaaraha heer sare ah sidoo kale.
Nidaamka oo dhan, laga bilaabo badalida barnaamijyada ilaa aad kaameeraha jiidho, waxay leedahay heer Poland ah oo kaliya ugu dhigma Apple's iOS ee iPhone XS. Maahan wax si arxan darro ah sida ugu dhakhsaha badan sida OnePlus 6 hawlgal, si fudud maxaa yeelay animationku waxay ciyaarayaan waqti dheer, laakiin si fudud ayey uga dhakhso badan uguna jilicsan tahay qalabka kale ee Android.
Nolosha batteriga ee Pixel 3 waa bartilmaameed guuraya. Caadi ahaan taleefannada casriga ah waxay u xasilloonaan heer caadi ah ka dib dhawr maalmood oo markii ugu horraysay la bilaabay.
Pixel The 3, Si kastaba ha ahaatee, ayaa hareereeyay 10% nolosha batteriga maalin kasta usbuucii la soo dhaafay, laga bilaabo nolosha batari 15-saac ah oo aan fiicnaan doonin wakhtiga jiifka. Dhowr maalmood ka dib way ku xoqdaa 24 saacadood, taasoo macnaheedu yahay inay ka dhigayso hal qaylo-dhaan subax ilaa kan xiga iyadoon wax lacag ah laga qaadin toddobaad ka dib tijaabada - ugu yar ee la aqbali karo 2018.
Taasi waxay la mid ahayd adeegsiga joogtada ah sida aaladdaydii ugu horreysay ee dirista iyo helitaanka boqolaal emayl ah, fariimaha iyo farriimaha riix, dhagaysi shan saacadood ah oo muusig ah oo leh 'Spotify' taleefoonnada gacanta ee Bluetooth, daawashada 30 daqiiqado Netflix iyo toogasho ku saabsan 10 sawiro maalin.
Qayb ka mid ah taasi shaki la'aan waxay ku dhacday teknoolojiyadda Batteriga Ada Ada ee Android 9 Qayb bartaa qaabkaaga isticmaalka oo xaddida awooda awooda barnaamijyada aadan n'ezie isticmaalin. Waxaa macquul ah in labada toddobaad ee soo socda nolosha batteriga sii socon karaan, in kasta oo ay u eg tahay in aan laga bixin xaddi badan.
Kusoo oogitaan buuxa iyada oo ay kujirto 18w xeedho deg deg ah ayaa qaatay 101 daqiiqo. Pixel The 3 Waxa kale oo ay kugu dallaci kartaa bilaa wireless ilaa 10w, taas oo waxyar ka gaabineysa fiilada laakiin wali waa ka dhakhso badan tahay taleefannada qaar waxay ku dallacaan kaariigyo xirxiran.
Android 9 goobeed
Badhanka awooda ee Pixel cad 3 waa casaan khafiif ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Pixel The 3 waxay waddaa nooca ugu dambeeya ee Android 9 goobeed, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah keliya taleefanno gacanta lagu sameeyo.
Faa'iidooyinka ugu weyn ee Pie ee noocyadii hore waa maaraynta ogaysiiska si ka wanaagsan, gaar ahaan ha ku dhibin (DND) hababka, is dhexgalka aaladda wanaaga ee raadraaca adeegsiga iyo habab lagu joojinayo adeegsiga, sida Wind Down, iyo is dhexgalka weyn ee nidaamyada AI.
Gaar ah Pixel 3 waa Google qoraallada caqliga leh ee loogu talagalay Gmail, kaas oo qaadanaya kambuyuutarado horumarsan oo laga yaabo inaad ku adeegsan laheyd Gmail barnaamijka biraawsarka mashiinka desktop-ka ilaa barnaamijka Gmail ee taleefanka. Aad ayey ugu wanaagsan tahay qorista emayllada.
Google ayaa waliba meesha ka saartay badhamada guriga iyo muuqaalka guud ee badhamada, iyaga oo ku beddelaya badhanka tilmaam kiniiniga ah ee dhexda iyo fallaar yar oo bidix ah.
Badhanka gadaal ayaa wali sameeya waxa aad filanaysid, laakiin badhanka tilmaamku waxay qabataa dhowr waxyaabood. Taabo si aad guriga ugu aado, dhagsii oo hay si aad u wacdo Kaaliyaha Google, kor u fuuji hal mar si aad u wareegto app ama laba jeer si aad u hesho khaanadda app (waxaad sidoo kale toos u aadi kartaa qaanadda app adoo kor u qaadaya shaashadda).
U jiidida batoonka dhaqdhaqaaqa ee dhanka midig wuxuu u rogaa isu shaandheyn kala dhexeysa barnaamijyadan dhowaan la adeegsaday markii aad fartaada ku dhaqaajiso bar-ka. Adigoo u riixaya badhanka midigta si toos ah ayaa loogu wareejiyaa barnaamijkii ugu dambeeyay ee la adeegsaday isla si la mid ah laba-badhanka badhanka guud ee loo adeegsaday.
Waxaa ka shaqeeya wanaagsan, laakiin waxaa jira xoogaa la bartey oo uma maleynayo inay dhab ahaan ka dhakhso badan tahay badhamada hore ee xawilaadda. Sidoo kale uma fiicna oo caqli galsan sida nidaamka bar-tilmaameedka Apple ee lagu soo bandhigay iPhone X, ama qaar ka mid ah nidaamyada tilmaam ee ay adeegsadaan kuwa jecel OnePlus ama Huawei.
Qalabka kamaradaha ee Pixel 3 waa mid fudud oo la yaqaan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Ammaan ma leh in la yiraahdo Pixel 3 leeyahay mid ka mid ah ugu fiican, haddii kale ka Kaamirooyinka ugufiican maanta.
Qalabka gadaal ee 12-megapixel wuxuu awood u leeyahay inuu qabto sawirro yaab leh, si tafaasiil leh, firfircoonaanta iyo kala-duwanaanta firfircoon. Way ka wanaagsan tahay tan kale oo dhan marka loosoo bandhigo faahfaahin iyo midab laga soo qaado muuqaallo aad u sarreeya halkaas oo ay ku jiraan iskudhafyo nalal ifaya iyo geesaha madoow oo ku mahadsan Google's HDR + algorithms.
Waxqabadka iftiinka hooseeya sidoo kale waa mid cajiib ah, taasna waa kahor ballanka Habeenkii loo Yaqaan ee Night Sight ee iman doona barnaamij cusboonaysiin ah dhowaan, taas oo Google ay sheegtay inay awoodi doonto inay soosaarto tallaallo habeen aad u wanaagsan.
Maxaa dejiya Pixel 3 Marka laga soo tago tartanka ayaa ah in waxaas oo dhan ay samayn karto iyada oo aan haba yaraatee lahayn xirfad isticmaale - kani waa bar-tilmaameedka kaasoo kaa dhigaya inaad u ekaato sida aad ogtahay waxaad samaynayso xitaa haddii aadan.
Top Shot-ka Google wuxuu u shaqeeyaa sidii la xayeysiiyay, adoo isticmaalaya aaladda AI si loo garto haddii mid ka mid ah galka badan ee ay qabsato ka hor iyo ka dib inaad ku dhufato batoonka xirniinka ayaa ka fiican iskudaaga, loogu talagalay marka qof uu ka gudbo ama googo'o aragtidaada.
Sidoo kale, Super Res Zoom wuxuu aad uga fiican yahay zoomka dhijitaalka ah ee caadiga ah, laakiin uma badnaan karo caddeynta zoomka 'Apple' ee zoomka telefishanka iyadoo la adeegsanayo lenska telefishanka 'iPhone XS' ee 2x ah.
Muuqaalkan ka daawo barta Instagram
Super Res Zoom oo ah Pixel 3
Boost ay wadaagaan Samuel Gibbs (@samuelgibbs) on Oct 12, 2018 at 6:30waxaan ahay PDT
Ku dhaho 10x iPhone XS
Boost ay wadaagaan Samuel Gibbs (@samuelgibbs) on Oct 12, 2018 at 6:32waxaan ahay PDT
Laba kamaradood selfie-ka ayaa qurxinaya safka hore: caadiga ah ee kamarad 8-megapixel ah ayaa ku soo biirtay laakiin kamarad ballaadhan oo ballaadhan oo xaddidan ayaa kuu oggolaaneysa inaad ku soo jiidato hal talaabo. Heerarka zoom ee caadiga ah kaameeradu waxay qabataa qiso aad u qurux badan oo faahfaahsan xitaa xaaladaha iftiinka crummy - haddii aad leedahay nabarro maqaarkaaga kaamiradan ayaa ku qaban doonta sharaftooda oo dhan.
Sawirka xagal ballaadhan wuxuu kaa caawinayaa inaad dad badan ku dhex gasho, laakiin sawirada ay qabteen ma ahan kuwo aad ufiican.
Habka sawirrada kaamirooyinka hore iyo gadaalba waa la wanaajiyay, gaar ahaan agagaarka timaha, iyo hadda oo leh karti isku habeynta blur gadaasha iyo gadaasheeda xaqiiqda ka dib. Qalabka dhaqdhaqaaqa laftiisa ayaa sidoo kale ah sixir, adoo sameeynaya toogashooyinka macro aad u sahlan - dhagsii shay diiradda ayaa ku xigta hareeraha.
Dhinacyada wareega ee aaladda waxay leeyihiin tayo lacageed oo ku saabsan iyaga, oo i xasuusinaysa gabagabadii caddaanka ee aan welwelsaneyn. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Sanduuqa dhexdiisa waxaad ka heli kartaa xirmo dhegaha 'USB-C ah, kaas oo u dhaqmo sida Google ee PixelBuds, iyo USB-C ilaa 3.5mm badalida telefishankaaga
Kuwa ku hadla waa runtii cod aad u sareeya oo cad oo aan lahayn wax dhalanrog ah oo la arki karo xitaa marka la eego ugu badnaan mugga iyo kala-soocidda wanaagsan ee stereo
Waad u jeedin kartaa wejiga shaashadda si aad u shiddo ha khalkhal
Jawaab-celinta Haptic ayaa ah tan ugu wanaagsan ee weli ku jirta taleefanka Android, leh gaaban, gariiraya fiiqan iyo laabasho, inkasta oo aan wali la isla dhexmarayn qalabka Apple's tapt ee Taptic Engine ee aaladeeda
Telefoonku wuxuu leeyahay e-sim, kaas oo lagu dhaqaaqi doono iyada oo loo marayo casriyeyn softiweerad ah sanadkaan dambe iyada oo EE la xaqiijiyay in ay taageerto
Waad u cadaadin kartaa dhinacyada inaad kiciso Google Assistant
Google wuxuu iibiyaa taagyeeri koronto la'aan ah oo loo yaqaan 'Pixel Stand' kaas oo taleefanka u rogaya muuqaalka Google Assistant smart
Google Pixel-ka 3 waxaa diyaar ah £ 739 leh 64GB oo kayd ah ama £ 839 oo leh 128GB keydin, doorashada madow, cad ama casaan.
Wixii la barbardhigo, 64GB Pixel ah 3 Qiimaha XL £ 869, ka Huawei P20 Pro kharashka £ 669, qiimaha Samsung Galaxy S9 £ 639, ka OnePlus 6 kharashka £ 469 iyo 64GB ah iPhone XS kharashka £ 999.
Qayb kasta oo ka mid ah Android 9 Duubka ayaa si tartiib ah u jawaabaya. Way fududahay in la isticmaalo laakiin awood ku leh fulintiisa. Laga soo bilaabo kamarad fudud oo quruxsan ilaa auto-dhammaystiran ee Gmail, Qalabka AI-ga ku shaqeeya ayaa xaqiiqdii waxtar leh. Intaa waxaa dheer waxaad helaysaa ugu yaraan saddex sano oo barnaamij cusbooneysiin ah, taas oo wali ah mid aan caadi aheyn oo ka baxsan ta Apple iPhone.
Telefoonka dibadiisa wuxuu dareemayaa raaxo, laakiin si ka duwan sida loo yaqaan 'iPhone XS'. Qaabka dhalada muraayadaha leh ay isugu dhexjirto muraayadda la sawiray iyo jirka ayaa u muuqda oo dareemaya qurux.
Gudaha iyo dibedda Pixel 3 wuu ka xariifsan yahay qalabka casriga ah ee Android, si buuxda u caddeynaysa soo gelitaanka Google ee horyaalada waaweyn.
Maahan mid hagaagsan, Dabcan; Nolosha batteriga dhab ahaantii waxay ku dheehan tahay sii dheeraynta, galaaska gadaaluna ka yaraan doonaa birta. Sidoo kale ma jiro wajiga furitaanka oo garka iyo wejiga weyn waxay u muuqan doonaan taariikh ku taal sanad ama wixii la mid ah.
Laakiin gabi ahaanba shaki kuma jiro in haddii aadan rabin £ 999 iPhone XS, Pixel ah 3 waa taleefanka casriga yar ee ugu wanaagsan.
Iidooyinka: super jilicsan iyo waxqabadka dareeraha, screen weyn, dhinacyada is jiidjiidi kara, Android 9 Jiid iyo 3 sano ee cusbooneysiinta, biyaha u adkaysta, kamarad cajiib ah, xukun wireless
Arrrimaha: garka weyn iyo wejiga, ma jiro bakhaar la fidin karo ama batari laga saari karo, jaakada mashiinka telefoonka, nolosha batteriga wey fiicnaan laheyd, aqoonsi wajiga ma jiro
Kaameeraha dhabarka ee gadaal ka hooseeya 1mm dherer ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Google Pixel 3 dib u eegis
← Amazon oo bilowday biyo u adkaysta shidin Paperwhite magaalada Chinese 'ayaa qorshaynaysa in ay bilowdo moon macmal ah si ay ugu bedesho wadooyinka’ →